Shahaadada Masterka ee Naqshadeynta iyo Qorsheynta Magaalooyinka [UJCV] - Geofumadas
Janaayo, 2016 Baridda CAD / GIS, tabo cusub, Maamulka Land
Tani waa mid ka mid ah ugu xiisaha badan ee degrees sayidkiisa Central America, ka fiirsaneysa inay muhiimadda ay dawladaha hoose iyo degdeg maldahan nidaamo lacag karin in maamulka dalka iyada oo diiradda la on horumarka aadanaha.
Beegantay xilli xiiso leh, marka University José Cecilio del Valle cusboonaysiiyay istiraatijiyad ay aragti in ay University ganacsi ee Honduras on, la-rogga xiiso leh xagga virtualization oo dhan geeddi socodka dhow iyo keenidda adeegyada lug helo profiles, kormeer, hanuunin; Tusaale xiiso leh haddii aan tixgelinno in mudnaanta koowaad ee akadeemiyadu ay tahay in wax la baro, cilmi baaris oo raad ku yeesho baahida bulshada.
Ku saabsan aqoonta.
Master of Design iyo Qorshaynta Urban ayaa faa'ido diyaariyey qaabka guud ee heshiiska iskaashiga ah ee University this a, ka-IFC Institute for Research Urban Jamhuuriyadda Korea iyo shirkadda Soosung Engineering, mid ka mid ah ugu weyn injineernimada iyo naqshadda dhismaha ee Korea. Waxaa lagu qeexaa sida saameyn graduate barnaamijka sare, loogu talagalay in lagu kobciyo oo kor loo qaado hawlaha xirfadeed si ay u bixiyaan xal dhamaystiran si loo hindiso iyo qorshaynta magaalooyinka, asaasiga ah si kor loogu qaado xubno horumarka dalka, looga baahan yahay qaybta ganacsiga, qaybta dadweynaha , ururada bulshada rayidka ah iyo iskaashiga caalamiga, sida ay qaynuunka iyo heerarka caalamiga ah.
xirfadlayaasha tareen awood lagu ogaan karo dhibaatooyinka magaalooyinka, oo daboolaya xaallada dhaqaale, deegaanka, dhaqanka iyo baaxaddaba, by codsanaya qalab farsamo iyo mabaadi'da design leh saldhig af iyo farsamo oo xoog leh ka ah dejinta iyo qiimaynta mashaariicda iyo waxqabadyada jireed-da'ayeen looga gollahaa sugitaanka nolosha magaalada.
xirfadlayaasha tareen la go'an tahay bulshada iyo anshaxa sare, iyadoo muuqaalka guud ee waxa qabashada magaalada ah, bixinta hababka la taaban karo oo lagu xalliyo dhibaatooyinka magaalooyinka iyo naqshadda, jidaynayey uhabeynta bannaan ee jirka degan ninkaan ee nolosha Adduunyo ee dhaw .
Foomka horumarinta magaalooyinka caddahay mas'uuliyadda bulshada, awood si ay u horumariyaan wadday mashaariic ku wajahan amro ama in koritaanka magaalooyinka sida ay xaaladaha gaarka ah ee deegaanka, iyo alaabtii design si loo hubiyo in meelmar ah ee mashaariicda magaalooyinka.
Master ee Design iyo Urban Planning UJCV soo saaraan xirfadlayaasha soo jeeda xooggan ee Urban Design, Qorsheynta Magaalada, Maamulka iyo Maareynta Project of Urban iyo Horumarinta Gobolka, aqoon of dhinacyo nidaamsan iyo farsamada in u ogolaadaan inay qorshaynta sax ah, urur, caymiska fulinta iyo isuduwidda khayraadka iyo dadka si loo gaaro ujeedooyinka, natiijooyinka iyo yoolalka magaalooyinka, magaalooyinka, degaanka iyo horumarinta gobolka.
Habka loo yaqaan 'high'.
Waayo, hadda waxa isku daraa khibrad leh jadwalka fasalka dalwaddii iman kara ka qayb qaadashada 6 8 in AHAY in Tegucigalpa, Honduras. Inkastoo aanan la yaabi doonin haddii ay si dhaqso ah u dhigi lahaayeen farsamo -taas oo hadda u muuqata khasaaro halis ah- ma ahan oo kaliya sababtoo ah tani waa mid aan dib-u-dhicin, laakiin maaddaama fasallo dhowr ah ay horayba u jireen oo ay ka kooban yihiin dhamaan waxyaalahoodii.
Waqtiga muddada waa 20 bilood (Hal bil ah 8 bilood), mudadaas oo ay ku jiraan qalabka 12 laga qaado iyo mashruuc digireed ayaa la soo saaray.
Qodobka walxaha waxaa loo qaybiyaa afar qaybood, oo sida aad arki karto, maaha oo kaliya diiradda farsamada dhaqameed ee jihada soo noqnoqda ee dhinaca injineernimada iyo macalimiinta; mulkiilayaasha ayaa codsan kara xirfadlayaasha goobaha bulsho sida ay ku dhacdo dalalka kale.
1. Block Block
Maareynta iyo Istiraatiijiyada Istaraatiijiga ah
Hordhac Maareynta Mashruuca
2. Block Block Analysis
Maareynta Dhaqan-Bulsheed ee Muuqaalka Magaalada
Qalabka iyo Dhismayaasha magaalooyinka
Heerarka, Qawaaniinta, iyo Maareynta Heshiiska
4. Xayeysiinta qorshaynta.
Deegaanka ee Mashaariicda Magaalooyinka
Dejinta iyo Maareynta Mashaariicda Guriyeynta Bulshada
Ugu dambeyntii aqoon-isweydaarsiga Tisaasta waa la fuliyaa. Mid ka mid ah wajigeyga oo soo jiidanaya dareenkeyga, taas oo u muuqata in aan noqdo mid aad u guuleysata waa in ardaydu ku qaataan inta kudhisan dhamaan fasalada mashruuc isku mid ah, oo ay dhammaystiraan muddada tababarka kala duwan. Ugu dambeyntii, soo bandhigida Thesis waa mid aad u sahlan, laakiin sidoo kale isticmaalka aqoontu waa wax yar oo ka mid ah rajo.
Faahfaahinta xirfadlayaasha u adeega fasalada oo kaliya maaha inay soo bandhigaan tababbarro ka yimid waddamada horumaray, laakiin sidoo kale habka aan loo aqoon iyo u gali kartida istaraatiijiyada, maamulka iyo xirfadaha ganacsiga. Tusaale ahaan, habka "gurisiinta bulshada" waxba maaha in la sameeyo guryaha yar ee dakhligoodu hooseeyo ee la dhisay curaarta dawladda, laakiin halkii fikradda ah isticmaalka caqliga ee meelaha bannaan oo leh heerar kala duwan ee xaaladda dhaqaale.
Waxay u egtahay in, si fiican loo horumariyay,marka laga reebo heerka farsamada- waxaad samayn kartaa xirfadlayaasha la awoodaha muhiimka ah ee ku yaala goobahan, sida gorgortanka, gudbinta fikradaha iyo hab in arrin caadi ah in la yareeyo qorshaynta dhulka la isticmaalo, taas oo la dhiso qalab in ku yeelan kartaa applicability wax ku ool ah si rasmi ah degmada a kaas oo ma aha gabay ah PDF waxtar leh oo u baahan hage loogu talagalay kormeerka iyo go'aan-qaadasho waa in sanad kasta marka ay qorshaha miisaaniyadda iyo maalgashiga.
UJCV- Bogga Master ee Honduras ama boostada qalinjabiyey (at) ujcv.edu.hn
Post Previous«Previous Waxyaabaha loo adeegsado isticmaalka QGIS ee ku jira Android & iOS mobile
Post Next Import Excel in QGIS wadataa iyo in la abuuro geesoolayaashuNext »
Jawaab u dir "Master of Design and Urban Planning [UJCV]"
Rosa Pinto isagu wuxuu leeyahay:
Wanaagsan! Tababar xirfadlayaal cusub oo loogu talagalay mashaariicda magaalooyinka oo leh xirfadlayaal khaas ah ayaa waxtar u leh qaybta, kuwaas oo hadda soo kabanaya.